युरोकपमा आज इटाली र इंग्ल्यान्डबीच भिडन्त, कस्ले मार्ला बाजी ? —
युरोकपमा आज इटाली र इंग्ल्यान्डबीच भिडन्त, कस्ले मार्ला बाजी ?
२७ असार २०७८, आईतवार १२:४२ admin
काठमाण्डौं । १६ औं संस्करणको युरोकप फुटबलको फाइनल खेल आज हुँदैछ । वेम्बली स्टेडियमा आज राति १२ बजेर ४५ मिनेटबाट सुरु हुने फाइनल खेलमा इंग्ल्यान्ड र इटाली प्रतिस्पर्धा गर्न लागेका हुन् ।
इंग्ल्यान्ड पहिलो पटक युरोकपको फाइनल खेल्दै छ भने एक पटकको च्याम्पियन इटाली चौंथो पटक फाइनल खेल्न लागेको हो । इंग्ल्यान्ड र इटाली दुबै टोली यस पटक उपाधि जित्ने लक्ष्यमा रहेका छन् । इटाली तीन पटकको च्याम्पियन स्पेनलाई हराउँदै उपाधि नजिक पुगेको हो ।
पहिलो सेमिफाइनलमा इटालीले स्पेनलाई पेनाल्टी सुटआउटमा ४–२ गोल अन्तरले पराजित गरेको थियो । इटालीको यो मुख्य प्रतियोगितामा १० औं फाइनल यात्रा हो । यस अघि इटालीले विश्वकपमा ६ र युरोमा ४ पटक फाइनल खेलिसकेको छ ।
इंग्ल्यान्डले डेनमार्कलाई पराजित गर्दै इटालीसँगको भेट पक्का गरेको हो । रोमान्चक खेलमा इंग्ल्यान्डले डेनमार्कलाई अतिरिक्त समयमा २–१ गोल अन्तरले पराजित गरेको थियो । इंग्ल्यान्ड युरोकपको फाइनल खेल्ने १३ औं राष्ट्र हो ।
इंग्ल्यान्ड सन् १९६६ पछि पहिलो पटक मुख्य प्रतियोगिताको फाइनलमा प्रवेश गरेको हो । इंग्ल्यान्ड र इटालीबीच हालसम्म २७ खेलमा प्रतिस्पर्धा भएको छ ।
टमाटर प्रयोग गर्नुका ५ नोक्सानीहरु यस्ता छन् । जान्नुहोस्
पाथिभारा माताको दर्शन गर्दै पढ्नुहोस राशिफल – २०७८ असार २९ गते, आइतवार, १३ जुलाई २०२१